Somaliland oo bur burisay guryo dad shacab ah | KEYDMEDIA ONLINE
Somaliland oo bur burisay guryo dad shacab ah
Shacabka ku dhaqan Magaalada Berbera ayaa walaac ba'an ka muuninaya bur burin lagu sameeyey guryahoodii, waxana iminka banaanka tuban haweenkii iyo caruurtii aqaladaasi ku hoyan jiray.
MUQDISHO, Soomaaliya - Subaxnimadii hore ee saakay ayey ahayd markii ay dowladda hoose ee Magaalasa Berbera ku dhaqaaqday bur burinta guryo ay daganaayeen dad rayid ah.
Guryaha la dumiyey oo ka badan 100 guri ayaa bur burintooda loo adeegsaday gaadiidka cagaf cagafta, waxana iminka banaanka waran alaabtii dadkaasi oo u badan kuwo dan yar ah.
Howshan bur burinta ayaa waxaa goob joog ka ahaa Xoghaya dowladda hoose ee Berbera, kaasoo dhulka la bur burinayo ku tilmaamay, mid sifo sharci darro ah lagu dhistay, oo loogu tala galay in danta guud loogu adeego.
Dadkan oo cabasho xooggan muujinaya ayaa qaarkood la hadlay warbaahinta, waxana ay sheegeen in aan la wargalin in guryahooda la bur burinayo, isla markaana ay ku baraarugeen cagafta oo ilinka aqaladooda taagan.
Guryaha la dumiyey ayaa ku yaala Xaafadda Xero-aboo ee Magaalada Berbera, waxana maanta halkaasi ka taagan xaalad kacsanaan ah, iyadoo ay isku soo baxeen dhamaan shacabkii Berbera, oo saacadaha soo socda lagu wado in ay dibadbax weyn dhigaan.